fiiso - ALinks
Ma waxaad raadineysaa habab cusub oo aad ku ballaariso meheraddaada? Shirkaduhu waxay sii kordhayaan raadinta inay kobciyaan howlahooda caalamiga maalmahan. In kasta oo Uzbekistan aysan noqon karin waddankii ugu horreeyay ee maskaxda ku soo dhaca marka laga fikirayo caalamiyeynta, waddanku wuxuu leeyahay
Haddii aad ka fiirsaneyso inaad ka shaqeyso Singapore, waxaa jira war wanaagsan. Daryeelka caafimaadka, gaadiidka, waxbarashada, aerospace, caymiska, utility, biomedical, iyo warshadaha dhismaha dhamaantood si xoog leh ayey u qorayaan shaqaalaha. Suuqa shaqada ee Singapore sidoo kale waxaa laga arkay isbedel dhawaanahan: loo shaqeeyayaashu waxay qorteen inbadan
Haddii aad ka timid waddan kale, waxaad u baahan tahay ruqsad shaqo oo Kanada ah si aad uga shaqeyso Kanada. Si aad uga shaqeyso Kanada, waxaad caadiyan u baahan tahay ruqsad shaqo. Xaaladaha qaarkood, waxaad ka shaqeyn kartaa Kanada fiiso la'aan ama a
Dad badan ayaan ka warqabin koboca dhaqaale ee Kolombiya ay sameysay tobanaankii sano ee la soo dhaafay. Kolombiya gudaheeda, waxaa jira dhowr qaab oo shaqo lagu dalbado. Iskuulada qaarkood waxay baaraan macalimiinta ka socda wadamada kale, halka shirkadaha waaweyn ee caalamiga ah ay ku xayeysiiyaan websaydhada shaqada sida